Sidee loo Hack khariidadku kuugu soo galaa Kombuyuutarkaaga
Ma xiraa kombuyuutarkaaga ama macmalkaaga? Halkan waa sida dib loogu soo celiyo:
Markii aan caruur ahaa, waxaan mar walba illoobi lahaa furaha gurigayga waxaanan ku qasbanaan lahaa in aan ku fuulo jaranjaradayn iyo gurguurtan iyada oo loo marayo daaqada jikadeena si aan dib ugu soo celino gurigayaga kadib dugsiga. Waxaan hubaa in hooyadey ay igu daalisay aniga oo iga daalay dhamaan alaabteeda oo aan ka baxo xayawaanka daaqada iyo dilida dhirta sanduuqa daaqada, laakiin waxay hubaal tahay in ay garaacday kursiga hore ee dhowr saacadood iyaga oo sugaya inay guriga ka soo noqdaan shaqada.
Hadda waxaan ahay qof weyn, marmar dhifo illoobo ama lumiyo furaheyga, laakiin waxaan ku guuleystey in aan naftayda ka saaro dhowr kombiyuutar iyo server ka badan dhowr jeer.
Sidaa darteed su'aasha ugu weyn waa:
Sidee ayaad dib ugu soo celin kartaa kombiyuutarka adiga oo aan wax jabin?
Waa hagaag, anigu idiinma ballan qaadi karo inaadan wax jebin doonin, laakiin waxaan ku siin karaa talooyin ku saabsan sidaad jidkaaga ugu celin kartid:
Fadlan ogow in talooyinkani ay yihiin ujeedo wacan oo keliya oo keliya, anigu ma dammaanad qaadayo in ay kuwani ama aysan shaqeyn doonin. Waa suurtogal in aad lumiso dhammaan faylashaada adigoo isku dayaya farsamooyinkaas, sidaas darteed u isticmaal khatartaada. Waxaan u maleynayaa in haddii aad akhrineyso boggan inaad ku jirtid wakhti xaddidan, tani waa ta ugu dambaysa.
Haddii aadan gali karin kombuyutarkaaga sababtoo ah PC-gaaga wuxuu ku dhacay fayras kombiyuutar ah, wuxuu qayb ka noqday barta bot-ga ama la jabsaday, ka dibna waa inaad u gudubtaa aniga oo la igu beeniyay! Hadda maxaa? maqaal ka hor intaadan sii socon. Tilmaamaha qodobka aad hadda akhrineysid waxaa loola jeedaa dib u soo celinta xafiisyada xisaabta ee maamulaha kaliya.
Wixii Windows 10/8/7 / Vista / XP:
Mid ka mid ah qalabyada ugu fiican waa Trine Rescue Kit (TRK). Qalabka lacag la'aanta ah (deeq-bixiyeha) ayaa kaa caawin kara inaad ka soo kabsatid lambarka sirta ah ee kombiyuutarkaada, ka soo kabashada faylasha, ka-daadinta aafada dhimashada, sigaar-cabbista xir-xirka xir-xirka, iyo qabashada howlaha kale ee soo-kabashada musiibada .
Qalabka Trinity Rescue Kit waxaa lagu dhejin karaa CD / DVD ama USB-ga oo waa inuu ordi karaa marka aad kumbuyuutarka kahoreysid ka hor intaan Windows loading. Waa inaad gashaa qalabka kombiyuutarkaaga ( bios utility ) oo dooro "Boot ka soo USB / CD / DVD" ka hor intaadan isku dayin inaad adeegsato adeeggan. Haddii aadan Boot ka helin USB / CD / DVD, Windows waxay u bilaabi doontaa sidii caadiga ahayd, TRK kuma dhicin. U hubso inaad hubiso buugga isticmaalaha PC-ga ee faahfaahinta sida loo helo habka BIOS / qaabeynta ka hor intaadan isku dayin inaad isticmaasho software-ka.
Haddii habkani uu ku guuldareysto inuu hubiyo maqaalkan 4SYSOPS dhowr habab oo kale oo dib u soo kabasho xisaabeed.
Mac OS X Snow Leopard, Leopard, iyo Tiger:
Ku darso OS X DVD-gaaga oo la yimid kumbuyuutarkaaga ama isticmaal dusha aad iibsatay si aad u cusbooneysiiso OS-da asalka ah oo aad dib u bilowdo Mac. Hoosta "ikhtiyaari" furan inta lagu jiro bilowga ilaa aad ka aragto Maamulaha Bilowga. Labaad-guji "Ku rakib Mac OS X". Markii qalab rakibay uu soo saaro, dooro adeegyadda ka dibna riix barta.
Kadib kambariyeha culus, dooro "Utilities" oo dooro " Reset Password ". Raac tilmaamaha lagu bixiyo khidmadda si aad dib ugu noqoto lambarka sirta ah .
Mac OS X Lion iyo kor:
Ku fur Macalinkaaga iyo furaha Fur-R sida ugu dhakhsaha badan marka bilawga bilawda. Hayso keydarrada illaa iyo inta laga helayo Logo-ka Apple.
Adeegga sirta ah ee sirta ah ayaa lagu qarsoon yahay OS X Lion laakiin weli waa la heli karaa. Ka dib markii isbeddelka bilawga ah ee la dhammaystiray waa inaad aragto adeegga Recovery HD . Markaad ku jirto qalabka korontada, fur daaqadda kumbuyuutarka oo calaamadee ereyga dib-u-habeyn oo riix furaha soo noqoshada. Raac tilmaamaha lagu bixiyey barnaamijka sirta ee dib-u-dejinta si dib loogu dhigo sirta maamulka .
Maxay 'DH' u taagan tahay?
Hordhaca Tiknoolajiyada Macluumaadka (IT)
Isticmaalka USB Adapters Wireless oo leh Xbox 360
Sidee ayaan u ciyaaraa .Daa Faylal?
Waa maxay Z-Wave?
Internet 101: Tilmaamaha Hagaha Tilmaamaha Hore
Si toos ah ayuu sida weyn u yahay internetka?
Cabirka Ethernet iyo Sida ay Shaqeeyaan
Maxaad u Abuuri laheyd Meme Internet?
Sidee si dhakhso ah u sawiraan una sawiraan Sawirada
Sida loo Xaqiijiyo Aqoonsigaaga Twitter
Flash Animation 10: Abuuritaanka Muuqaal Cusub
Tilmaame Lagu Sameeyo Madaxda Emailka ee Gmail
Maxay Goobaha Macaamiisha GMX Mail POP3?
Waa in uu qabaa Module Drupal ah ee Dhismaha Bogsi
Tababarka iTunes: Sida Loo Mamibiyo DRM Laga Yeelo Your iTunes Songs
Faylka Faylasha ee Faylka iyo Isticmaalkooda
Fursadaha Codsiga Furan si aad u sameyso Hab Dhismo
Cunugga 3-aad ee Dib-u-eegista Nano
Regsvr32: Waa Maxay & Sida loo Diiwaangeliyo DLLs
Sidee loo tirtiraa dhawaaqa codka ee iPhone
Ugu sareeya 17 Dagaalkii Dunida II Isticmaalkii Isticmaalka Waqtiga Real Time Ciyaaraha PC
Waa maxay "Epeen"? Waa maxay macnaha ereyga?
Dhimashada Shimbiraha Dhimashada
Dami Shuruudaha Aqoonsiga Labada Talaabo ee Outlook.com
Farqiyada Inta u dhaxeysa 9.7-inch iyo 12.9-inch iPad Pro
Badbaadi Email ka yimid Hotmail ilaa Disk Hardsen sida EML